Parution du Mercredi, 20 Janvier 2021
Tous Actualités Ado Astuces Beauté Coiffure Coronavirus Forme Maman Minceur Mode People Sakafo Santé Shopping Sosialy
Archive du 08-oct-2020
Misy perte : Mety ve ilay mampiasa karibonetra, yaourt, tongolo gasy?
Betsaka ireo fanelingelenana miseho aminny vehivavy, aminny taovam-pananahany. Isanireo ny perte.
Digana arahina rehefa hanao « make-up »
Maro amintsika vehivavy no te-hanao izany « make up » izany kanefa tsy mahafantatra ireo fitaovana sy produits hampiasaina ary ny fomba fanaovana azy akory.
Maska yaourt, manamaina mony haingana
Kazana maska natoraly iray azo itaizana ny tarehy be mony na mora mitera-menaka aminizao vanim-potoana mampiova ny toetrandro izao no atoronny Jejoo anao anio. Anisanny tena mahomby ho anireny karazan-koditra ireny ity atoronay anao ity. Isa-kerinandro eo no tsara hanaovana azy ity.
Tena afaka manala tasy aminny tarehy ve ny tantely ?
Toa tsy mety afaka mantsy ny ahy fa efa nanandrana aho. Aminny ankapobeny, rehefa mampiasa akora voajanahary entina mikolo endrika, dia mila manana faharetana. Tsimoramora mantsy no fomba hanatsarany ny hoditra,
Drakaka aminny dipoavatra mainty
Akora ilaina · Drakaka lehibe 6 · Menaka hanendasana ½ ny tasy · Dipoavatra mainty tsy voatoto 2 sf · Tongolo gasy nopotsehina 1 sk · Sakay mena notetehina manify · Saosy soja 4 sf · Saosy huitres 2 sf · Siramamy 1 sk · Dibera 50g · Rano 300ml · Tongolo maitso tahony 2 notetehina manify · Kotomila tahony 1
Ireo olo-malaza manana tahotra hafahafa
Toy ny olombelona rehetra dia manana ny zavatra atahorany ihany koa ireo olo-malaza. Misy mahatsikaiky anefa ny anny sasany aminizy ireo.
Mitazona ny lanja tsy hihetsika, azo hatao
Tena zava-dehibe ny mampihena tena. Dingana tsy azo ihodivirana sady tsy azo tsinotsinoavina mihitsy koa anefa ny fitazoman-danja rehefa nahavita nihena
Shopping « Jifao ny antsika »
1.2 : Sahafa personnalisé - Page Facebook « DrawiN » Contact: 034 08 866 06
Voaroy hazo : Mampitony goty sy cystite
Voankazo vokatra aminizao vanim-potoana fanombohanny fahavaratra izao ny voaroy hazo.
Milanto, 37 taona : Vao manjamanja aho dia vonoiny
Saika isanandro dia maharay fitarainana avy aminareo mpamaky, mahakasika ny herisetra mihatra ao an-tokantrano izahay eto aminny Jejoo.
ALASORA Lehilahy nitaingina bisikileta maty nofaohanny taxibe
ANJERIMANONTOLO Hiditra aminny 02 Novambra
Aminny 02 Novambra ho avy izao no hiditra ireo mpianatra eny aminny anjerimanontolo.
HIRA SY HORONANTSARY PIRATY 10 lahy hiakatra fitsarana
Tsy mitsitsy intsony ny Brigade anti-piratage sy ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fanaovana tsinontsinona ny sanganasanireo mpanankato sy mpamokatra horonan-tsary
BAKALOREA 184.338 ireo mpiadina manerana ny Nosy
Hotanterahina ny 19 ka hatraminny 22 Oktobra ho avy izao ny fanadinana Bakalôrea ankapobeny manerana ny Nosy.
Tsy fanjarian-tsakafo aorianny Covid19 Nametraka vahaolana ny PAM
Maro be ireo ankohonana no nisedra tsy fahampiana tao anatinizao fisianny Covid19 izao. Mba entina hitadiavana vahaolana haingana dia nametraka ny mVAM ( mobile Vulnerability Assessment and Mapping) ny PAM. Ity fomba fiasa ity dia natao mba ahazoana ireo tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fomba fisakafonireo ankohonana eto an-drenivohitra sy any ambanivohitra,
SAMPANA MPAMONJY VOINA Vonona hiatrika ny fotoam-pahavaratra
Vonona tanteraka aminny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana, tarihinny Lieutnant colonnel Razafimanahaka.
Ady aminny fiovanny toetrandro Nahazo famatsiam-bola 1.348.962 dolara isika
Efa tsapa sy iainana ankehitriny ny vokatry ny fiovanny toetrandro. Drafitra maty paika arakizany no entinny Ministeranny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovainjafy miatrika izany.
Toamasina Nahazo fanomezana ireo mpianatra mendrika taminny CEPE sy BEPC
Tsy nanadino ireo mpianatra mendrika indrindra taminny fanadinana CEPE sy BEPC tao Toamasina ny Ben'ny tanàna any an-toerana RAKOTONIRINA Nantenaina sy Ramatoa vadiny.
Barea de Madagascar Hatao fitiliana Covid-19 anio
Efa ao anatinny fanazaran-tena hiomanana aminny lalao ara-pirahalahiana izay ifanandrinany aminny ekipa Burkinabe ao Luxembourg ny Barea ani Madagasikara aminizao fotoana.
Covid-19 Niakatra 19 ny voa eto Analamanga
Mararinny Covid-19 miisa 110 no indray niara-sitrana omaly, manerana ny Nosy, araka ny tatitra ofisialy nentinny profesora Vololontiana Hanta.
Ady aminny Covid-19 Nanolotra arontava ny CCAW
Manoloana ny fitohizanny ady aminny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara dia tonga nanolotra aron-tava ho anny Ministeranny Fahasalamam-bahoaka ny avy eo aminny « Chambre de Commerce Chine-Afrique de Whenzhou (CCAW),
Vehivavy mpanao asa tanana ao Bongolava Dihihina ny ahazoanizy ireo karatra matihanina
Isanny laharam-pahamehanny Ministeranny Indostria, ny Varotra ary ny asa tanana ny fanohanana sy fampiroboroboana ny fandraharahana malagasy eo aminny vehivavy.
19-janv-2021 18-janv-2021 15-janv-2021 14-janv-2021 13-janv-2021 12-janv-2021 11-janv-2021 08-janv-2021 07-janv-2021 06-janv-2021 05-janv-2021 04-janv-2021 31-déc-2020 30-déc-2020 29-déc-2020 28-déc-2020 22-déc-2020 21-déc-2020 18-déc-2020 15-déc-2020 14-déc-2020 09-déc-2020 08-déc-2020 07-déc-2020 04-déc-2020 03-déc-2020 02-déc-2020 01-déc-2020 30-nov-2020 27-nov-2020 26-nov-2020 25-nov-2020 24-nov-2020 23-nov-2020 20-nov-2020 19-nov-2020 18-nov-2020 17-nov-2020 16-nov-2020 13-nov-2020 12-nov-2020 11-nov-2020 10-nov-2020 09-nov-2020 06-nov-2020 05-nov-2020 04-nov-2020 03-nov-2020 02-nov-2020 30-oct-2020 28-oct-2020 26-oct-2020 23-oct-2020 22-oct-2020 21-oct-2020 20-oct-2020 19-oct-2020 16-oct-2020 15-oct-2020 14-oct-2020